Philips DryCare Essential Hairdryer BHD006/00 ~ ICT.com.mm
HomePhilips DryCare Essential Hairdryer BHD006/00
Philips DryCare Essential Hairdryer BHD006/00
Warranty:2Years This Philips Essential Care dryer gives you the power and care you need and it is designed for quieter drying, witha20 % sound improvement versus HP4940. Now... [Learn more]
This Philips Essential Care dryer gives you the power and care you need and it is designed for quieter drying, witha20 % sound improvement versus HP4940. Now you can enjoyapowerful and comfortable experience wherever you go. Dual voltage: Yes.
1600 ဝပ်အားရှိတဲ့ Philips အမှတ်တံဆိပ် Dry Care Hairdryer ဟာ သင့်ရဲ့ ဆံသားတွေကိုအမြင့်ဆုံးလေစီးဆင်းမှုနဲ့ အငြင်သာဆုံး ခြောက်သွေ့အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တာကြောင့်နေ့ရက်တိုင်းမှာ သင့်ရဲ့ဆံနွယ်တွေကို လှပနေစေမှာပါ။ ဆံနွယ်တွေကို ခြောက်သွေ့စေဖို့အကောင်းမွန်ဆုံး ခြောက်သွေ့မှုအပူချိန်ကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပြီး ဆံသားတွေကိုအပူမလောင်ဖို့အတွက်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ThermoProtect temperature settingပါဝင်ပါတယ်။ အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပေမဲ့ လေစီးဆင်းမှုနှုန်းက ကျမသွားပဲ သင့်ရဲ့ဆံသားတွေကိုပိုမိုဂရုတစိုက် ထိန်းသိမ်းနိုင်စေမှာပါ။ အပူချိန်နဲ့ လေအမြန်နှုန်းကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Speed Settingအဆင့် သုံးခုပါဝင်ပြီး သင်နှစ်သက်တဲ့ စတိုင်ကို အမြန်ဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံးရရှိအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ Hairdryer တစ်လုံးမှာ မရှိမဖြစ်ပါဝင်သင့်တဲ့ Professional setting ကတော့လေအေးနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Cool Shot ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Cool Shot ဟာ အေးမြတဲ့လေစီးကြောင်းကိုအသုံးပြုပြီး သင့်ရဲ့ဆံနွယ်တွေကို အပြီးသတ်မှာ စတိုင်ကျစေဖို့ ကူညီပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Philips Essential Care dryer ဟာ ဆံနွယ်တွေကို စတိုင်ကျလှပနေစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပါဝါနဲ့ Settingတွေထည့်သွင်းပေးထားသလို အသံဆူညံမှု ပိုမိုလျော့နည်းအောင်လည်း ဒီဇိုင်းထုတ်ပေးထားပါတယ်။ယခင် HP4940 Hairdryer ထက် 20% ပိုမိုတိတ်ဆိတ်တဲ့အသံနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။အာမခံသက်တမ်း နှစ်နှစ်အထိ ပေးထားတဲ့အတွက် စိတ်ချလက်ချနဲ့ ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့
Hairdryer တစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။